Accueil > Gazetin'ny nosy > Ravalomanana: Nivoaka ny didy fisamborana azy dia lasa nandositra izy ?
Ravalomanana: Nivoaka ny didy fisamborana azy dia lasa nandositra izy ?
Nahoraka omaly tontolo fa lasa nitsoaka nandositra nandeha ny fiaramanidina niazo an’i Afrika Atsimo ny filoha teo aloha Ravalomanana. Ny fanampim-baovao re dia tsy ao Afrika Atsimo no tanjony fa any Kenya ka any izy aloha no hialokaloka, miandry ny fivoaran’ny raharaha eto Madagasikara. Taorian’ireny fanehoan-kevitra nataony tamin’ny talata teo ireny mantsy, izay nanizingizinany fa “heveriny ho toy ny tsy misy izany didim-pitsarana nanameloka azy tamin’ny taona 2010 izany”, ary nanakianany mafy ny fitsarana Malagasy, satria hono, “tokony ny Fitsarana Avo (Haute Cour de Justice) no mitsara ny tenako satria filoha amperin’asa aho tamin’ireny, ary tsy nametra-pialana fa namindra fahefana (???) dia tsy ara-dalàna ny fitsarana ny tenako eo anoloan’ny Fitsarana tsotra…”, dia notsindrian’ny minisitry ny fitsarana, Rtoa Rasolo Elise, ny tolakandron’iny talata iny ihany fa “manan-kery ary mitombina ny didim-pitsarana nanameloka ny filoha teo aloha Ravalomanana, saingy raha tsy afa-po izy satria hoe tsy nanatrika ny fotoam-pitsarana azy dia afaka miroso amin’ny fepetra nofaritan’ny lalàna amin’ny fanoherana (opposition)-n’izany didy izany”. Tsy nohadinoin’ity minisitry ny fitsarana ity anefa ny nanipika fa “rehefa tapitra ny fotoana nomen’ny lalàna azy ho amin’izany fampiasany ny zony izany dia azo ampiharina avy hatrany ny didim-pitsarana nanameloka azy”. Izany hoe ny fisamborana azy izany satria voasazy hanao asa an-terivozona izy e!
Notsindrian’i Monja Roindefo ny alarobia ny resaka hoe “ny filoha teo aloha Ravalomanana ihany no nanomboka nampitsara olona nitondra fanjakana teto raha vao tafakatra teo amin’ny fitondrana izy ka efa nisy ny didim-pitsarana raikitra na “jurisprudence” tamin’izany dia iny fotsiny no toy ny lalàna nampiharin’ny fitsarana taminy tamin’ny 2010 ka manan-kery iny didy nanasazy sy nanameloka azy iny”.
Omaly alakamisy àry dia nahoraka ny feo fa nisy ny famoahan’ny fitsarana didy fisamborana an-dRavalomanana ho fampiharana ny didim-pitsarana nanameloka azy”. Omaly tolakandro ihany dia re fa lasa nitsoaka nandositra any am-pitan’ny ranomasina Ingahirainy ka niazo an’i Afrika Atsimo ary hipaka any Kenya”. Nahenoana fanamafisana avy amin’ny tompon’andraikitra avokoa moa ireo vaovao ireo omaly takariva.
Ho an’ny tompon’andraikitra misahana ny fiarovana ny lafin-tany eny amin’ny seranam-piaramanidina iraisampirenena eny Ivato dia karazan’ny eson-teny no nataony hoe “hay ve ka kanosa toa iny Rangahy iny nefa miseho ho be vava aoka izany”. Nahoana, hoy ihany ity tompon’andraikitra eny Ivato ity, raha nijoro dia naseho fa tsy matahotra na inona na inona aho satria didim-pitsarana heveriko ho toy ny tsy misy ny isamboranareo ahy?
Fanondranana antsokosoko: Sokatra miisa 126 sarona teny Ivato
Na maro aza ireo olona efa tratra izay nikasa ny hanondrana harena voajanahary antsokosoko avy ivelany, dia misy foana ireo manandrana manao izay fanondranana antsokosoko izay, manararaotra ihany koa ny gaboraraka misy eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato. Isan’izany ity raim-pianakaviana teratany Malagasy izay saron’ny PAF na ny polisy misahana ny sisi-tany sy ny habakabaka, omaly tolakandro. Sokatra miisa 126 no hita tao anatin’ny valizy roa izay nentin’io raim-pianakaviana io. Rehefa nanao ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana avy amin’ny PAF dia fantatra fa any Vietnam no saika nanondranana ireto sokatra ireto. Fiaramanidin’ny kaompania Kenya Airways hihazo an’i Nairobi moa no saika nandehanan’ity farany ary teo ampanaovana ny “enregistrement” izy no avy hatrany dia nentin’ireo polisy satria efa noahiahian’izy ireo. Voalaza moa fa nisandoka ho mpiasan’ny Antenimieram-pirenena ity lehilahy ity ary nilaza ny hamita iraka any ivelany. Taratasy hosoko maro no tratra teny aminy, mikasika izay hoe fandehanana hamita iraka any ivelany izay.